Weather amụma Worldwide | Chekwa ụgbọ oloko
Weather amụma Worldwide
Ụlọ > Weather amụma Worldwide
Weather amụma gburugburu ụwa – Ngwaọrụ ihu igwe – Ọnọdụ ihu igwe – Weather map – Ozi ihu igwe
Celsius na Fahrenheit Weather amụma
Anyị World Weather amụma bụ ma na Celsius na Fahrenheit, biko nwee ndidi mgbe akụrụngwa dị n'okpuru ihu igwe na-ebu ibu ma jiri akara ngosi magnifier ? n’elu akuku iji choo onodu ubochi onodu na ị nwere ike ịgbanwe n'etiti Celsius na Fahrenheit.
May 18th 2022, Wenezde
Achọrọ m ịchọta ihu igwe maka na °C°F .
Nwere ike ịdọrọ gị pointer pointer na Weather map n'okpuru na-aga n'ebe ọ bụla na-aga n'ụwa, ị ga-ahụ ikuku ikuku na nkọwa ndị ọzọ dị ka ogo ihu igwe dị ugbu a.
Na mgbakwunye, I nwekwara ike iji slide mmanya na ala nke window ka Oge mgbanwe ma buputa ma buputa ya na komputa gi.
Mgbe ị hụrụ obodo nke nwere mmasị gị, ị nwere ike pịa aha, ị ga-enweta ozi gbasara ihu igwe gbasara ọnọdụ obodo ahụ.
ego: N'elu 10 Uche Weather Phenomena
Anyị hụrụ nnukwu vidiyo iji gosi gị ụfọdụ ihe ngosi ihu igwe dị egwu na-abụghị akụkụ nke amụma ihu igwe nkịtị.
Anyị ga-achọ ịnye ndụmọdụ na ajụjụ nkịtị, Amụma ihu igwe ziri ezi?
Enwere okwu na ndu, na naanị 2 ihe na ndụ na-ekwe nkwa bụ na ị ga-akwụ ụtụ isi gị na ị ga-emesị nwụọ, ihe ndi ozo abughi nke doro anya.
Otú ọ dị, ịkọ amụma ihu igwe zuru ụwa ọnụ, ndị na-amụ gbasara ihu igwe, jiri ụdị mgbakọ na mwepụ, nke ziri ezi, ma ha bu ndi mmadu ma ha puru imehie na oke ikpe, ma ọ bụ ikpe nke mgbanwe mberede na ihu igwe.
Anyị nwere olile anya na ị masịrị ngwa Weather anyị ma ọ bụrụ na ị masịrị gị, anyị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-eji anyị na saịtị ahụ iji nweta ndị kasị mma na dị ọnụ ala Train Tickets Prices, dị nnọọ gaa Chekwa ụgbọ oloko.
Ị chọrọ Embed a page jidesie gị na saịtị, dị nnọọ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fweather-forecast%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)